उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै लिभरपुल फाइनलमा, बार्सिलोना पराजित - Namasteholland, News, Information and Technology
उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै लिभरपुल फाइनलमा, बार्सिलोना पराजित
२५ बैशाख २०७६, बुधबार ०७:२३0652
च्याम्पियन्स लिगको इतिहासमा अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट ‘कमब्याक’ गर्दै लिभरपुल फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । पहिलो लेगमा तीन–शून्यले पछि परेको लिभरपुलले घरेलु मैदानमा बार्सिलोनालाई चार–शून्यले हराउँदै समग्रमा चार–तीन गोल अन्तरले फाइनलमा पुग्न सफल भयो ।
लगातार दोस्रो सिजन च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पुग्ने क्रममा लिभरपुलले घरेलु मैदान एनफिल्डमा ऐतिहासिक कमब्याक गर्न सफल भयो । बार्सिलोनाको घरेलु मैदानमा तीन शून्यको हार ब्यहोरेको लिभरपुल दोस्रो लेगमा कमब्याक गर्न सक्छ भन्ने झिनो आशा रहेको थियो । तर बार्सिलोना १९८६ पछि युरोपियन प्रतियोगितामा यति ठूलो हारपछि बाहिरिन बाध्य भयो ।
मुख्य खेलाडी मोहम्मद सलाह र फेरमिन्हो नहुँदा दबाबमा रहेको लिभरपुलको जितमा ओरिगी र वाइनाल्डमले दुई–दुई गोल गरे । खेलको सातौं मिनेटमा ओरिगीको गोलमा लिभरपुलले खेलमा अग्रता बनायो । पहिलो हाफमा एक गोलको अग्रता बनाएको लिभरपुलले दोस्रो हाफमा झन उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सफल भयो ।
२ मिनेट भित्र लिभरपुलका लागि वाइनाल्डमले २ गोल गर्दै खेल समग्रमा तीन तीनको अवस्थामा पुर्‍याए । उनले खेलको ५४ औं र ५६ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । त्यसपछि ७९ औं मिनेटमा ओरिगीले ब्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि एनफिल्डमा उपस्थित सबै समर्थकमा खुशीको सीमा थिएन ।
त्यसपछि बार्सिलोना खेलमा फर्कन सकेन र स्तब्ध बन्यो । लिभरपुलका प्रशिक्षक जुर्गेन क्लोपले पनि यो जित अविश्वसनीय रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
१९ माघ २०७५, शनिबार १०:३१0360
एकजना नेपाली रक्तदान गर्न ११ हजार किलोमिटर टाढा गए ।
११ फाल्गुन २०७५, शनिबार ००:२७0650
२२ फाल्गुन २०७५, बुधबार १०:२३0402
Hey Buddy!, I found this information for you: "उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै लिभरपुल फाइनलमा, बार्सिलोना पराजित". Here is the website link: https://www.namasteholland.com/%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a5%83%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%ae%e0%a4%a8-%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a6%e0%a5%88/. Thank you.